Sheeko, shekel! : Gaso, ganuun, Gasiin Q. 46aaad Prof. Cali Jimcaale Axmed – Balcad.com Teyteyleey
Toxob ayaa sidi ruux makalaalaxay fadhi-bood haw ah ku soo toosay. Inta ow indhaha kala furay ayuu saas ula raacay meeshi uu curadkiisu jiifay. Foolka ayuu kaduuday oo haddana indhaha ka mirigmirigsiiyay. Waxa uu meeshi ka waayay Jabaq. Dareen horleh oo ka murugo badan riyadi aan qarawga lahayn asii makalaalaxa ku riday ayaa ku dhashay. Inta uu garguurtay ayuu sida qof aan wax arag gacanta midig ku raadshay wax uu meel ku ogaa. Waxa uu soo haabanwaayay wiilki. Haddana gacanta bidix ayuu isyiri ku doon. Waaba xaa ii dhiibatay oo waa meel eber ah. Isaga oo weli indhaha isku haysta ayuu sii garguurtay. Haddana waa kii dib ugu soo noqday kobti uu ka hilhishay. Waxay ula ekaatay in uu jiiro dheer soo galay. Mar labaad ayuu haddana isla sidii hore u garguurtay isaga oo markaan wax uu taabto sugaya iskana hubinaaya.
La soco Q.47aad
The post Sheeko, shekel! : Gaso, ganuun, Gasiin Q. 46aaad Prof. Cali Jimcaale Axmed appeared first on Ilwareed Online.
Faduma Dayib oo loo magacaabay xil aad u muhiim ah